Kufanana kweMac Kunouya neZvinhu Zvitsva uye Mutengo Wakaderedzwa | Ndinobva ku mac
Kufanana kweMac kunouya nezvinhu zvitsva uye mutengo wakaderedzwa
Manuel Alonso | 23/11/2021 14:00 | Mac Os X
Kana wanga usingazive, ndinokuudza kuti tiri muvhiki yeBlack Friday. Hongu, chakatanga seChishanu chave vhiki, asi isu tinotoziva kuti kunyangwe muna Gumiguru mune zvitoro zvatova nougats. Ini ndinofungidzira zuva richauya apo Kisimusi neBalck Chishanu zvisingaperi uye ivo vanofanirwa kugadzira chimwe chinhu chitsva. Asi panguva ino, isu tichatora mukana wezvose zvinopihwa izvo Isu tanga tichikuisa paWebhu uye itsva dzinouya. Somuenzaniso izvi Kufanana kunopa nezvinhu zvitsva uye mitengo.
Parallels ichangobva kuzivisa shanduro yayo itsva ye Parallels Toolbox yevashandisi veMacOS. Neiyo 5.1 yekuvandudza, chimwe chezvakakosha chinhu chitsva cheCPU tembiricha chishandiso. Maererano a blog post, Pane shanduro mbiri dzeParallels Toolbox, imwe yeMac uye imwe yeWindows. Neshanduro 5.1, imwe neimwe yeaya masisitimu anoshanda ane ayo matsva ekushandisa.
Kune vashandisi veMacOS, Parallels Toolbox inowedzera itsva CPU tembiricha chimiro:
Ichi chishandiso chinokuudza tembiricha yega yega yeCPU cores muMac yako, uye inonyorawo kumhanya kwefan kuri kutonhora kubva kune aya macores. Kupisa ndechimwe chezvikonzero zvikuru zve "kupfeka" mumagetsi, uye panguva imwe chete geek zviri mandiri, anoda kuziva nezve tembiricha yeMac.Zvinofadzawo kuona izvo zvikumbiro zvinokonzeresa tembiricha yeCPU kukwira zvakanyanya.
Idzi ndidzo dzese nhau dzekuvandudza:
Clipboard nhoroondo: ikozvino tinogona kusarudza kana tichida kuunganidza chete zvinyorwa, mifananidzo chete kana zvese zviri zviviri.
Unit converter: mamwe maviri maviri uye Russian emambo zvikamu.
Usakanganisa: iyo nyowani yenguva yekumisikidza sarudzo inobvumidza iwe kuseta kuti chishandiso chinoramba chichishanda kwenguva yakareba sei.
Window maneja: isu tinokwanisa ikozvino kugadziridza hwindo kune imwe saizi kana kuifambisa kune imwe skrini.
Nguva yekuzorora: tsigiro yezvikamu zvekudzokorora zvakawanda, maminetsi makumi matanhatu enguva dzekushanda, uye kugona kudoma yako yebasa chirongwa (zvese mumazuva nemaawa).
Faira: ikozvino isu tinogona kusarudza kuti mafaera anoguma achachengetwa kupi.
Nzvimbo yekurekodha, hwindo rekurekodha, yekurekodha skrini: Yakagadziridzwa compression algorithms kuitira kuti mafaera anobuda atore nzvimbo shoma yedhisiki.
Kunze kweizvi zvose. Iyo software inouya nea 20% dhisikaundi nekuda kwevhiki yeBlack Friday. Ichi chinopihwa chinopera muna Zvita 1, saka une vhiki yekusarudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Kufanana kweMac kunouya nezvinhu zvitsva uye mutengo wakaderedzwa
Black Friday inopa nhasi Mbudzi 23
Epic Mitambo inopa iyi mitambo miviri yeMacOS kwenguva shoma